16 April, 2019 in Wararka by
War Goordhow aan helnay ayaa waxaa uu sheegaya in rag hubeysan ay Xaafada suuq Bacaad ee degmada Yaaqshiid ku dileen Nin la sheegay in uu ahaa Ganacsade.
Rag bustoolado ku hubeysnaa ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen dilka Ninkaas oo wararka aan helnay ay sheegeenayaan in uu ahaa mid ka Ganacsada Qalabka dhismaha, iyada oo dadkii ka dambeeyey dilkiisa ay goobta ka baxsadeen.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa waxaa ay gaareen halka uu dilka ka dhacay,waxaana ay sameeyeen howlgallo baaritaano ah,wallow dilkaasi aysan weli jirin cid ay u qabteen.
Ehelada Ganacsadaha la dilay ayaa goobta tegay, iyaga oo halkaasi ka qaaday Meydka,waxaana Goobjoogayaal ay sheegeen in mudo Saacad ku dhow ay istaagtay Shaqada Suuq Bacaad,isla markaana dadka ay cabsi soo wajahday.
Weli majirto cid sheegatay mas’uuliyada dilkaas iyo sababta loo dilay, hayeeshee waxa uu kusoo aadayaa xilli xalay fiidkii Wiil dhalinayaro ahaa ay Kooxo hubeysan ku dileen meel u dhow Saldhiga degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir.